Ingiriiska oo maanta ka baxaya Midowga Yurub – Hornafrik Media Network
Ingiriiska oo maanta ka baxaya Midowga Yurub
By Liibaan Nuur	 Last updated Jan 31, 2020
Maanta oo ku asteesan 31ka Janaayo 2020 ayaa la qorsheeyay in Ingiriiska ay noqotay xiliga uu sida rasmiga ah kaga baxayo ururkii uu 47 sano xubin firfircoon ka ahaa ee Midowga Yurub, waxaana hirgeli doona qorshihii loogu magac daray (Brexit).
Kadib sadex sano iyo bar oo jahweer siyaasadeed ka taagnaa dalka ingiriiska, iyadoo ay mudadaas isbadaleen ilaa sadex ra’iisul wasaare iyo afti dadweyne oo la qaaday sannadii 2016-kii, waxaa maanta lagu wadaa in uu soo afjarmo walaaci siyaasadeed.
Waxaa la qorsheenayaa in maanta ay maagalada London gaar ahaan meesha lagu magcaabo South Bank ay ka dhacaan isu soo baxyo ballaaran kuwaas oo lagu muujiyo ka bixitaanka Ingiriiska ee Midowga Yurub iyo bogga siyaasadeed ee cusub ee u bilaabmaya wadanka Ingiriiska, sidoo kale waxaa banaanbaxyo kale la filayaa in ay ka dhacaan Brighton iyo Bournemouth.
Ingiriiska ayaa galaya xaalad siyaasadeed oo kumeelgaar ahilaa iyo bisha Diseembar ee sannadkan, waxa uuna noqonayaa waddankii ugu horreeyay ee ka baxa ururka Midowga Yurub, iyadoo la filayo in arrintan ay saameyn ku yeelato dhaqaalaha Yurub.
Coronavirus: WHO oo ku dhawaaqday xaalad caafimaad oo deg-deg ah
Wasiir Cawad “Soomaaliya waxa ay si siman ula dhaqantaa dowladaha is khilaafsan”